Jireenyi baqattoota Oromoo Keenyaa keessaa maal fakkaataa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Obbo Dabbasaa Guyyoo Irrechaa bara 2015 irratti eebbaa fi baruumsa aadaa kennaa turan.
Mootummaan Itoophiyaa gama angaawotaa Keenyaatiin baqattoota Oromoo biyyattii keessa jiraatan irratti sarbama mirgaa raawwataa jira jedhuu, gartuun baqattootaa fi dhaabbanni mirga namomaa 'Human Rights Watch'.
Haawwaasni Oromoo keenyaa keessa jiraatan ayyaana Irreecha bara kanaa Onkolooleessa 15, bara 2017 kan kabajan mooraa dhuunfaa keessatti.
Kunis bakka dur ayyaanicha itti kabajanitti kabajuuf hayyama waan dhorkamaniifi.
Kun wan haaraa miti kanaan duras yeroo gara garaatti mirgi keenya sarbamaa ture jedhu baqattoonni.
Diriirsaa Qajeelaa, itti gaafatamaa sabqunnamtii Waldaa Walgargaarsa Hawaasa Baqattoota Oromoo Keenyaati.
"Rakkoon amma nurra gahaa jiru kun ayyaana Irreecha bara 2015 booda achi buuteen hayyuu seenaa fi aadaa Oromoo Obbo Dabbasaa Guyyoo dhabamuun eegale," jedha.
Goodayyaa suuraa Ayyaana Irreecha bara 2015, Naayiroobii Keeniyaa
Obbo Dabbasaan Fulbaana 27, 2015 ayyaana irreechaa magaalaa Nayiroobii keessatti kabajanii erga galanii booda ture kan achi buuteen isaanii dhabame.
Bara darbes ayyaana Irreechaa kabajuuf magaalaa Nayiroobii naannoo Siitii Paark jedhamutti kan walgahan dhalattoonni Oromoo 42, hayyama walitti qabamuu hin qabdan jechuun poolisii Keenyaan hidhamanii turan.
'Mootummaa Itoophiyaa mufachiisa'
"Ayyaana kana waggoota 15 darbaniif kabajaa turrus, wanti bara darbee akka nun mudanne, 'hayyama walitti qabamuu' jedhame sana gaafachuu dhaqnus nuuf hin hayyamne," jechuun Diriirsaan BBC'tti himeera.
"Jalqaba iyyannoo keenya Koomishinii Poolisii kaawuuntii magaalaa Nairoobiif dhiyeessinee, isaanis gara buufata Poolisii Gigiri jedhamuutti nu qajeelchan, jedha.
Ajajaan buufata poolisii Gigiiriis "siyaasaaf jecha hayyamni walitti qabamuu kun isiniif hin kennamu, kana yoo goone mootummaan Itoophiyaa nutti mufata, hariiroon gaarii qabnu akka badu hin feenu," nuun jedhe, jedha Diriirsaan.
Yoo dursa Imbaasii Itoophiyaa irraa ayyana kana kabajachuuf hayyama argattan nuus isinii hayyamna jechuudhaan ajaajaan kun gorsa nuuf kennaniirus jedha.
Goodayyaa suuraa Irreechi bara 2017 mooraa dhuunfaa keessatti kabajame
Akka seera biyyattii boqonnaa 56 mata duree Labsii Nageenya Uummataa jedhu jalatti, walgahiiwwan hawaasummaa fi aadaa, tola ooltummaa akkasumas kan daldalaatiif hayyamni akka hin barbaachifne ni eera.
Irreechi walgahii aadaa ta'us, yeroo gara garaatti dhadannoowwan mootummaa Itoophiyaa balaalleffatan irratti dhageesifamaa ture.
"Nuyi baqattoota waan taanef Imbaasii Itoophiyaa deemnee gaafachuu hin dandeenyu," jedha Diriirsaan.
Baaqattoonni hedduun Keenyaa keessa jiraatan sababa siyaasaaf Itoophiyaa keessa baqatanii bahan.
''Asitti takkumaa nageenyi natti dhagahamee jiraadhee hin beeku. Yeroo hundaayyu yoom naqabanii biyyatti na darbatuu jechuun yaaddoo fi sodaa keessan jiraadha,'' jedha Diriirsaan.
''Akkan beekuutti yeroo baayee qabanii gara biyyaatti na darbachuuf yaalii baayeen godhameera. Kunis Imbaasiin Itoophiyaa poolisii Keenyaa waliin ta'uun waan isaan narratti gochuuf yaalaa turaniidha,'' jechuun dubbata.
Kanas Komiishinii olaanaa baqattootaa mootummoota gamtoomanii UNHCR fi Sekretariyaatii dhimma Baqatootaa Kenyaatti himadheera jedhu.
Poolisiin Keenyaa fi Imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru hariiroo michoomaa cimaa qabu jedha qorataan olaanaa dhaaba mirga namoomaa 'Human Rights Watch' Feeliks Hoorn.
"Kanaan dura taateewwan hedduu Poolisiin Keenyaa fi Imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru waliin ta'uun, baqattoota lammii Itoophiyaa fi koolugaltoota itti dararan, doorsisanii fi hidhan 'Human Rights Watch' galmeeffatee of harkaa qabas" jedha Feeliks.
Hawaasni Oromoo ayyaana Irreechaa akka hin kabajne dhorkamuun isaaniis mala ittiin baqattoota biyya kana jiran abdii kutachiisanii fi doorsisani kan biroo ta'uu danda'as jedha.
Keenyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii, Gaaffiin Imbaasiif dhiyaate akka hin jirree fi dhimma Poolisiin Keenyaa hayyama dhorkachuu akka hin dhageenyeefi quba akka hin qabne BBCtti himaniiru.
Gabaasa 'Human Rights Watch' mootummaan Itoophiyaa fi Poolisiin Keenyaa waliin ta'uun baqattoota butanii gara biyyaatti deebisu, dararaas irraan gahu jechuun dhiyeenya kana baaseef deebii yoo kennan,
Itoophiyaan koolugaltoota butanii deebisuu haalte
"Nuyi hojii enyuuniyyuu asii biyya geessuu fi achii as fiduu keessa hin jirru, kun asoosamadha," jechuun BBC'tti himanii turan ambaasaddar Diinaan.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf Komishinii poolisii kawuntii magaalaa Nayiroobii fi buufata poolisii Gigiriitti deddeebinee yaalii goonus, yaada nuuf kennuuf hayyamamoo hin taane.